बाहिरियो आफ्नै वडा अध्यक्ष फसाउने जनमोर्चाको 'झुठो पुलिन्दा' - ढोरपाटन पोष्ट
२०७७ माघ १५, बिहीबार १७:१४
वडा अध्यक्ष पुनले दल त्याग गरेका होईनन् जनमेर्चाले झुठो विवरण पेश गर्यो आयोगमा :
सत्य, न्याय र जिम्मेवार राजनैतिक आस्था बोकेका थोरै कार्यकर्ता तर विधि, नीति र थितिको वकालत गर्ने राजनैतिक पार्टि राष्ट्रिय जनमोर्चा भएको अन्य दलले समेत स्वीकार गर्दछन् । त्यसमा पनि निष्ठाको राजनीतिमा जीवन विताएका चित्रबहादुर केसीलाई सम्मान नगर्ने कमै मान्छे होलान । तर त्यही दल र नेतृत्वबाट ढोरपाटन नगरपालिका वडा नं. ४ का वडा अध्यक्षलाई अत्यन्त झुठो आरोप ‘दल त्याग’ को विवरण निर्वाचन आयोगम पेश गरेर पदबाट हटाउने निर्णय बाहिर आएको छ । आखिर राष्ट्रिय जनमोर्चाले आफ्नै वडा अध्यक्ष पुनमाथि किन यस्तो हर्कत गरयो ? यो प्रश्नको नाजवाफ नेतृत्वले कार्यकर्ता कसरी रिझाउन, यो प्रश्न आम कार्यकर्तामा छाएको बताएका छन् ।
फुत्कियो राजमोको झुठो पुलिन्दा :
आफ्नै दलमा रहिरहेका र दलबाट निर्वाचित वडाअध्यक्ष तिलक पुनलाई पार्टिका स्थानीय केही नेता र जिल्ला नेतृत्वलाई मन नपरेका कारण, सफेद् झुठ्को खेति गर्नुपरेको कुरा बाहिरिएको छ । वडा अध्यक्षमा निर्वाचित भएपछि, दल परिवर्तन नगरेसम्म त्यो पदबाट हटाउन नमिल्ने व्यवस्थाका कारण जनमोर्चालाई एक झुठको सहारा लिनुपर्ने बाध्यता आइलागेछ । जो कुरा स्थानीय पार्टि कार्यकर्ताका लागि एक हास्यश्रृङ्खला जस्तो अनुभूति भएको होला । पार्टिमा त्याग, बलिदान, तपश्या र निष्ठासहितका जिउँदो कार्यकर्ता पुन सहित वडा सदस्य तिलबहादुर फगामीलाई नेपाली काँग्रेसमा प्रवेश गरेको भन्ने झुठो आरोप सहितको पत्र केन्द्रिय कार्यालयले निर्वाचन आयोगमा पेश गरेको खुल्न आएको छ । निर्वाचन आयोग जिल्ला कार्यालय बागलुङ मार्फत ढोरपाटन नगरपलिकाको कार्यालयलाई लेखिएको पत्रमा, निर्वाचन आयोगको पत्र संख्या ०७७/०७८ च.नं. ७१, मिति २०७७/१० १४ को प्राप्त पत्र र राष्ट्रिय जनमोर्चा केन्द्रिय कार्यालय, बुढानिलकण्ठ, कपन काठमाण्डौको च. नं. १४, मिति २०७७ मंसिर ९ गतेको पत्र सहित राजमो सचिवालय केन्द्रिय कार्यसमितिको बैठकबाट २०७४ मा सम्पन्न स्थानीय तहमा निर्वाचित वडा अध्यक्ष तिलक पुन र सदस्य तिलबहादुर फगामी, २०७६ मंसिर १४ गतेदेखि नेपाली काँग्रेसमा लागि राष्ट्रिय जनमोर्चा परित्याग गरेको जानाकारी निर्वाचन आयोगमा पेश गरिएकोले उनीहरुले दल त्याग गरेपश्चात वडा अध्यक्ष र वडा सदस्य पद रिक्त रहेको व्यहोराको पत्र प्राप्त भएको छ ।
स्थानीय स्तरमा निरन्तर वडाको काममा लागेका र उनीहरुलाई विभिन्न आरोपहरुमा राजमोबाट कार्वाही गरि सदस्यताबाट समेत हटाइएको पत्रहरु वडा कार्यालयको भित्तामा समेत टाँस गरिएका समाचारहरु सुनिएको थियो । तर वडा अध्यक्ष पुन र सदस्य फगामी नेपाली काँग्रेसमा प्रवेश गरेको वा गएको भन्ने कुनै तथ्य नरहेको स्थानीय कार्यकर्ताहरुले दावी गरेका छन् । ‘सबै झुठ र बद्मासीहरु पार्टिकै नेताहरुले गरेको यो सबुत प्रमाण हो, यहाँभन्दा लज्जाको विषय केही नहुने स्थानीय कार्यकर्ता भीम पुनले बताउनुभयो । किन पार्टिले एक व्यक्तिका लागि अर्थात आफ्नै पार्टिका इमान्दार जुझारु कार्यकर्ता लखेट्ने, बद्नाम गर्ने, पार्टि छोड्यो भन्ने झुठो कुरा गरेर जननिर्वाचित संस्थाबाट गलत्याउने काम गरयो, यो सरासर केही अन्यायपूर्ण व्यवहार गर्ने नेताहरुको बद्मासी हो, उहाँले भन्नुभो, अव हामीलाई कुन दिन? कुन समय, कहाँ, कसरी पुन र फगामी काँग्रेस प्रवेश गरे त्यस्को तथ्य पेश गर्नुपर्दछ । होईन भने झ्ठको पुलिन्दाका कार्यकर्ताको बद्नाम गर्नेहरुप्रति सिंगो पश्चिमको कार्यकर्ता पंक्तिले विरोध र भ्रत्सना गर्छौं ।’ हामीलाई यस्तो हरिगति देखेर अचम्ममात्र होईन, बदमासी गर्नेको हदप्रति समेत चिन्ता लाग्यो । लाज लाग्ने कामको कसरी समथैन गर्ने ? उहाँले भन्नुभयो । मैले थाहा पाएसम्म त पुन र फगामीलाई पार्टिले साधारण सदस्यतासमेत नरहनेगरि कार्वाही गरेको समाचार मार्फत आएको थियो । कार्वाही पछि उनीहरुलाई स्पष्टिकरण समेत सोधिएको छ, काँग्रेसमा लागे कहिले? यस्तो पनि हुन्छ ? पुनले प्रश्न गर्नुभयो ।
को हुन तिलक पुन :
राजनैतिक आस्थामा कैंयौं कार्यकर्ताहरु, यो व्यवस्था भत्काएर अर्का व्यवस्था, जसलाई नयाँ जनवादी व्यवस्थाको परिकल्पना गरिएको छ । त्यसको लालरक्षकका रुपमा आफूलाई समाहित गरेका एक योद्धा हुन तिलक पुन । सानै पार्टि भएपनि निष्ठाका कारण समर्थन गर्नेहरु मध्यका त्यसमा पनि ढोरपाटन नगरपालिका वडा नं. ४ का वडा अध्यक्ष पदमा अत्यधिक मतले निर्वाचित जनप्रतिनिधि हुन तिलक ।
उनको सार्वजनिक परिचय वडा अध्यक्ष, जनमोर्चाका होनाहार योद्धा, कार्यकर्ता मध्य पनि राजनीति दर्शन बुझेका अगुवा, कम्युनिष्ट आदर्शलाई जनताको जनजीवन बदल्ने हतियार मान्ने, आफ्नो राजनैतिक अस्था, विश्वास र भरासा हसनसपर्छ भन्ने मान्यताका एक अथक निडर र सहासी नेतृत्व पनि हुन उनी ।
जसरी फलामले फलाम खान्छ भने जस्तै नेता खाने नेता नै हुँदारहेछन् । घटनाक्रमले यही दावी गर्छ । जीवनको अनेकन यात्रा, घुम्तीहरुमा बागलुङले नचिनेको मान्छे होईन तिलक पुन । तर आफ्नै नेता र नेतृत्वको उनीभन्दा माथिहुनेहावी महत्वकाँक्षी र व्यक्तिगत स्वार्थका हिमायतीहरुले सहन नसकेको एकलकाटे कार्यशैलीका नेता र उनका पदलोलुपताका पात्रहरुले पुनमाथि बद्ख्वाई गरेको भित्रीकथा उनका समकक्षीहरुले बताउँछन् । उनलाई अहिले विभिन्न वहाना र प्रपञ्चमा दुख दिने नियतका साथ स्वयं उनी समर्थक पार्टिका नेतामात्र होईन सिंगो पार्टिले यो दुस्साहस गरेको छ ।
साविक खुँगाको लुकुरवनमा जन्मेका पुन, उनको राजनैतिक जीवनको यात्रा राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेकपा मसालमै थियो र अहिले पनि त्यही छ । पुनको जीवनलाई नजिकबाट नियाल्नेहरु किताबमा पढिएका शाहसिक, कर्तव्य निष्ठ, निस्वार्थ एक विशिष्ट कम्युनिष्ट कार्यकर्ताको स्वरुपमा रहेको बताउँछन् । झन्झटिलो र बाँगो टिंगो होईन सिधा र प्रष्ट भाषमा आफ्ना मत राख्ने, खरो गरि नकरात्मक सवालको चाहे आफ्ना चाहे विराना सबैको खरो आलोचना गर्ने, आफू गल्ती नगर्ने र गल्ती गरेकाले तत्काल सच्याउने तिर प्रेरिति गर्ने स्वभाव पुनको रहेछ । झुटो नबोल्ने, कसैले झुट बोल्यो भने नरुचाउने, कम्युनिष्ट दर्शनलाई खरो रुपमा जीवनमै उतारेर उदाहरण बन्ने व्यक्तित्वका रपमा आफ्नो परिचय बनाएका पुन जिल्लामा अहिलेपनि रुचाउनेको चाम अत्यधिक छ । अहिलेपनि सो पार्टिको जिल्ला नेतृत्व गर्नेहरुदेखि केन्द्रसम्मको पद बताउनेहरु अहिलेकै समयमा पुनको जस्तै जीवन जीउने हिम्मत कमै मान्छेले गरेका हुन्छन् । विरोधकालागि विरोध वा आलोचनाका लागि आलोचना उनको जीवन शैली थिएन र हैन । समस्या समाधान सहितको नेतृत्व भूमिका रहेका पुनले कुशलतापुर्वका कार्य सम्पादन गर्ने क्षमता रख्छन् । तर आदर्शच्यूत मान्छेहरुको दवंग भएकै कारण पार्टिका केही गलत नियतका नेताहरुको तगारो बन्न पुगे पुन ।
दर्शन, सिद्धान्त, विचारका ठूला–ठूला कुरा गरे पनि त्यही अनुरुपको जीवन बनाउनेहरु पछिल्लो समयमा सायदै न्यून भेटिन्छन । त्यस्ताको भिडबाट अलग मध्ये एक व्यक्तित्व हो पुनको जीवनी । जस्लाई अदर्श मेटनेहरुले विभिन्न टिकदम गरेको, स्वार्थमा अनेकन वहाना बनाउनेहरुलाई मन नपरेको त्यत्ति मात्र हेईन अनरगल आरोपहरु लगाएर पार्टिबाट निस्काशन, निलम्बन र सम्बन्धनै नराख्नेगरि वेवास्ताका सिकार भएका कार्यकर्तापनि उनै पुन हुन् ।
जीवनकालको उमेर १५÷१६ वर्षदेखिनै मसालको राजनीतिमा लाग्नु भएका ४२ वर्षका पुनले आफ्ना सिद्धान्त र निष्ठा बचाउने प्रयत्न गर्दा आज त्यहीनिष्ठा बोकेको दलले पद त्याग गरेको गलत र झुठ आरोप निर्वाचन आयोगमा पेश गरेर पद खाने काम गरेको छ । त्यो पुनको राजनीति सक्ने तरिकाले गरिएको अत्याचार रहेको स्थानीयले कार्यकर्ताले बताए ।
शसस्त्र द्वन्द्वको समयमा तत्कालिन नेकपा माओवादीले मिति २०६१ सालमा पुनलाई अपहरण गरि कुटपिट गरेको थियो । माओवादीकै कारण पुन सहित सिङ्गो परिवार विस्थापित बन्यो । माओवादी कार्यकर्ताको निर्घात कुटाईका कारण पुनको अहिले पनि मृगौलामा समस्या छ । अहिले पनि निरन्तर औषधी सेवन गर्नु पर्ने बाध्यता छ ।
जनमोर्चाको जिल्ला समिति, रक्तिम सांस्कृतिक अभियानको जिल्ला समितिमा रहेर व्यापक रुपमा काम गरेका पुन वडा अध्यक्ष भएदेखि वडाको विकासमा निरन्तर लाग्नु भयो । एक सच्चा माक्र्सवादी मात्र होइन जनचाहना बुझ्ने एक विकासप्रेमी नेता स्थापित भएका कुशल वडा अध्यक्षका रुपमा नगरपालिकाले चिन्ने व्यक्ति हे पुन । वडा अध्यक्ष भएपछि बनेका बाटो, खानेपानी, स्वास्थ्यचौकी भवन, विजुली लगायतका कामले उनको प्रशंसा गर्नेहरु स्थानीय स्तरमा धेरै रहेछन् । तर केही नितान्त स्वार्थका लागि मरिहत्ते गर्नेहरु उनको यो राम्रो कामको विरोध र मिथ्या आरोपहरु बोल्दै जाने गरेको देखियो । उनीहरुकै कारण कलहको वातावरण बनाउने, नेता र पार्टिमा गलत रिपोर्ट गरिदिने, उनलाई भेटेर कुरा नगरी जिल्लास्तरबाट कपोलकल्पित रिपोर्ट बनाएर छानवीन समितिको नामबाट पार्टि परित्याग गरेको आरोप केन्द्रमा पुर्याएर जनमोर्चा आफ्नो बदनामी आफै कमाएको देखिन्छ ।
पुनले, ढोरपाटन नगरपालिकामा भएका अनियमितता, अपारदर्शीताका विरुद्ध बोल्ने एक्लै बोले, जहाँ पार्टिले साथ समर्थन दिएन । किन त्यसो गरेको होला भनेर बुझ्दा उनीप्रति गरिएको अपहेलना पो रहेछ । धेरै पटक पालिकाको बैठकमा पालिकाबाट भएका गलत क्रियाकलापको विरोध गर्ने पुनका विषयमा नीति निर्देशनका विषयमा पार्टिले जनप्रतिनिधि परिचालन गर्ने सम्यन्त्र वा निर्देशक तोकेर काममा परिचालन गरेको नभई तिलले बोलेका र उठाएका विषयप्रति ध्यान नदिने नीति नेताहरुले ल्याएको पाइयो ।
२०७६ कार्तिक १२ गते साँघातिक हमलामा ३२ टाँका लाग्ने गरि कुटपीट :
वडा अध्यक्ष तिलक पुनसहित आधा दर्जन युवामाथि पार्टिकै कार्यकर्ता भनिले हुलहुज्जत समुहले कात्तिक १२ गते भाईटीकाका दिन संगठित रुपमा निर्घात कुटपिट गरे । कुटपीटमा गम्भिर घाइते अध्यक्ष पुनको टाउकोमा ३२ वटा टाँका लगाइएको थियो ।
अध्यक्ष पुनसँगै घाइते हुनेमा बागलुङ जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक राजेन्द्र ढुंगानाका स्वकीय सचिव दिलिप बुढाथोकी मगर, सवारी चालक कोपिल बुढाथोकी मगर, जनमोर्चा वडा प्रमुख गनबहादुर फगामी मगरको टाउकोमा गम्भिर चोट लागेको थियो । उनीहरुको टाउँकोमा दर्जन बढि टाँका लगाइएको थियो । घटनामा सव ओभरसेयर सुमन बुढाथोकी मगर र वडा कार्यालयका कम्प्यूटर अप्रेटर उमेश बुढाथोकी मगर सामान्य घाइते थिए । उनीहरुमाथि जनमोर्चाको असली कार्यकर्ता बताउने पूर्व शिक्षक कुलबहादुर छन्त्याल, ईन्द्रबहादुर छन्त्याल, तुलेन्द्र छन्त्याल, दलबहादुर छन्त्याल, दीपक छन्त्याल, हिराबहादुर छन्त्याल, हिमाल छन्त्याल, विप्लव छन्त्याल, रहेको बताइएको छ ।
धिरी आधारभूत विद्यालयको खेलमैदनमा भलिबल खेल्ने केही विद्यार्थीबीच भनाभन भएको विषयलाई निहुँ बनाएर बोलाई मेलमिलाप गरौं भनि एक्कसी आक्रमण गरिएको थियो । ‘विद्यार्थीहरु सामान्य झगडा गरेछन । यसो गर्नु हुँदैन भनेर सम्झाउने क्रममा सोखोला फेदी पुलमा पुगेर छलफल गर्दै थियौं । एक्कासी मकै बारीमा लुकेर बसेका समूहले पछाडीबाट आएर खुकुरी, चिरुवा दाउराले एकोहोरा हाने । हामी बेहोस भयौं । स्थानीय जनताले तल धिरीमा खबर गरेपछि साथीहरु आएर उद्दार गरे’, पाँच दिनपछि होस्मा आएको घटनामा घाइते भएका दिलिप बुढाथोकीको भनाई छ । सोशही घटनामा मादक पदार्थ सेवन गरि सम्मिलित भएका स्थानीय लालबहादुर विकलाईसमेत ठोक्किएर चोट लागेको थियो । उनले अफै उपचार गर्ने र बढी चोट अध्यक्ष पुनसहितको टिमलाई लागेको भन्दै स्वयं उपचार गराएको विकले बताउँछन् । घटनापछि मुद्धा चलेको थियो । उक्त घटनामा पार्टिका जिम्मेवार कार्यकर्ता कुटपीट गरिएको भन्दै, समयमा घटनाको विषयमा छानवीन वा जाँच बुझ गर्न नसक्नु पार्टिका तर्फबाट गल्ती कमजोरी रहेको स्वीकार गरिएको थियो । साथै उक्त घटनामा संल्ग्न कसैलाई पनि पार्टिले संरक्षण नदिने लगायतका विभिन्न बुँदामा लिखित सहमति गरिएको थियो ।
घटनापछि, पसनले पार्टिकै सल्लाहमा एक विज्ञप्ति प्रकासित गरि तत्कालिन उपनिर्वाचनमा राष्ट्रिय जनमार्चाका उमेदवार खीम विक्रम शाहीलाई मतदान गर्न जनतालाई आह्वान गरे । विज्ञप्ति प्रकासित भयो । घटनाको पार्टिले स्वच्छ अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारी समेत लियो । तत्काल निर्वाचनमा जुट्नु पर्ने भनेपछि सहमतिमा वडा अध्यक्ष पुनका तर्फबाट र जनमोर्चा बागलुङका अध्यक्ष अमर बहादुर थापाका तर्फबाट एक एक प्रति विज्ञप्ति निकाल्ने सहमति गरिएको बताइन्छ । त्यसमा पनि जिल्ला अध्यक्ष थापाले विज्ञप्ति निकालेनन् । वडा अध्यक्ष पुनले मंसिर ११ गते निकालिएको विज्ञप्ति यस्तो थियो ।
उक्त विज्ञप्तिमा मंसिर १४ गते भएको उपनिर्वाचनमा पार्टिका तर्फबाट प्रदेश सभा निर्वाचनमा उमेद्वार बनेका खिमविक्रम शाहीलाई मतदान गर्न आह्वान गरिएको विज्ञप्तिमा देखिन्छ । उक्त निर्वाचनमा कुटपीटबाट शख्त घाइतेभएका पुन र फगामी आफ्नो वडामा खटिएको तिलबहादुर फगामीको भनाई छ ।
निर्वाचन भयो, परिणाम पनि आयो, त्यससँगै गत असार १३ गते ढोरपाटन नगरपालिकाको नगर परिषद चलिरहेको थियो । खुँगामा विदेशबाट राहत पढाएको खाद्य सामाग्री खोलामा फालिएको र उक्त घटनमा पुनको निर्देशन तथा वडा सदस्य फगामीको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको भनी उनीहरुमाथि नै आरोप लगाइएको थियो । घटनाक्रमपछि, घटनास्थलमा प्रहरी पुग्यो, खास सवुत प्रमाण फेला परेन तर सामान्य मुचुल्का बनाएर अध्यक्ष पुन लगाएत स्थानीय य्ुवाहरुलाई फेरि मुद्धा चलाइयो ।
वडाअध्यक्ष पुन र सदस्य फगामीलाई असार २३ गते चित्रबहादुर केसीको विज्ञप्ति मार्फत पार्टिको साधारण सदस्यताबाट निश्कासन गरिएको कुरा वाहिर आयो । यो समयसम्म उनीहरुलाई घटनाका विषयमा कुनै कसैले सोधेका थिएनन् । आरोपको स्पष्टकरण सोधिएको थिएन तर एकाएक भदौ महिनाके २७ गते वडा कार्यालयमा स्पष्टकरण सोधिएको पत्र टाँस गरियो ।
पुनलाई सोधिएको स्पष्टकरणमा उनले पार्टिलाई यस्तोपत्र लेखेर पठाएका थिए ।
त्यस अधि फगामी र पुनले दिएको स्पष्टिकरण यस्तो थियो ।
त्यसपछि जनमोर्चा केन्द्रिय कार्यालयबाट आएको अर्को पत्र :
त्यत्तिले मात्र पुगेन पुनलाई फेरि अर्को स्पष्टतापत्र आयो । जतिवेला राष्ट्रिय जनमार्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी कोरोना संक्रमणका कारण् अस्पताल भर्ना भएका थिए । तर सोही समयमा केसीद्धारा हस्ताक्षरित पत्रमा पुनलाई यस्तो कुरा सोधिएको थियो । त्यो पत्रको समेत हुलाक मार्फत पुनले पार्टिको केन्द्रिय कार्यालयमा पत्र पठाएका थिए ।
यो सबै हुँदै गर्दा पुनके पदच्युतका लागि पार्टिका केन्द्रिय नेताहरु निर्वाचन आयोग पुगेको खबर बाहिरिएको थियो । केन्द्रिय समितिमा पुनलाई विभिन्न आरोप सहित पार्टिले कार्वाही गरेको र निर्वाचन आयोगमा पदच्यूतको निवेदन लैजान कृते माईन्युट तयार भएको खबर समेत वाहिरिएको थियो । झ्ठो र कपोलकल्पित काम गर्न हुन्न भनेर आफ्नो अडान राखेपछि एक जना केन्द्रिय सदस्यलाई समेत पदबाट हटाइएको, कार्वाही गरिको मोहनविक्रमको विज्ञप्तिमा उल्ल्ेख भएर आएको देखिन्छ ।अहिले, स्थानीय स्तरमा तिलक पुनले पाटि परित्याग गरेको अर्थात दल त्याग गरेको भन्ने जिल्लाके सिफारिस, केन्द्रको बैठकको निर्णय सहित निर्वाचन आयोगमा झ्ठा विवरण पठाएर आयोगबाट समेत अबदेखि वडा अध्यक्ष पद नरहेको जनाएको छ । पुनको अध्यक्ष पद सक्न जनमोर्चाले किन यत्ति ठूलो शक्ति खर्च गरको होला ? स्थानीय पार्टि कार्यकर्ताको जिज्ञासामात्र होइन, यहाँ जिल्ला पार्टिमा रहेका एकाध पदलोलुपी र पार्टिको निष्ठा आदर्श बेचेर कार्यकर्ताको खुन पसिनामा बाँचेका नेताहरुको गलत रवैया हो यसलाई जनताले समयमा हिसाव गर्ने उनीहरुको धाराणा छ । राजनीतिक दुनियाँमा आफ्नै वडा अध्यक्षको पद सक्नको लागि यत्तिधेरै शक्तिको दुरुपयोग गर्ने राष्ट्रिय जनमोर्चाको यो हर्कतको अन्य दलहरुबाट समेत निन्दा भएको छ । कार्यकर्ता स्तरमा प्रष्टरुपमा यो अन्यायपूर्ण व्यवहार भएको भन्दै, विरोध जनाएका छन् । आपत्ति प्रकट गरेका छन् ।
२०७६ कार्तिक १२ गते तिहारमा भएको घट्नाको विषयलाई लिएर उहाँलाई गिरफ्तारी गरिएको छ । उहाँको विरुद्धमा ज्यानमार्ने मुद्धा दर्ता भएको छ । मुद्धाको फेसला अदालतले देला त्यो एक पाटो हो । तर पुनलाई जसरी षड्यन्त्रपूर्वक ढङ्गबाट जेलमा सडाउने प्रपञ्च रचिएकोे छ त्यो दुर्भाग्यपूर्ण छ । कार्यकर्ता स्तरबाट उक्त कार्यको विरोध भएको छ ।
पुनमाथि हदसम्मको अन्यय किन गरियो ?
पार्टिको जिल्ला नेतृत्व सदस्य बनेका पुनलाई संकटकालिन अवस्थामा माओवादीले कुटपीट गरयो । पुनलाई मृगौलाको समस्या भयो । उपचार गर्नुपर्ने, घरबाट बाहिर जानुपर्ने, सम्पर्क हुन आज जस्तो फोन सम्पर्क थिएन । पार्टि बैठकमा भैंसी चराउँछ जैगलमा भन्ने देखि विदेश गयो, अन्तै बसाई सरेको होला भन्ने मनगणन्ते रिपोर्टहरु उनका विरुद्धमा स्थानीय नेताले बुझाउने गरेका रहेछन् । उपचारपछि पुन पार्टि कार्यालय र सम्पर्कमा आउँदा उनी विरुद्ध गलत रिपोर्ट गरिएको थाहा भयो । उनले उक्त विषयको खण्डन गरे । नकरात्म रिपोर्ट दिनेहरुलाई अझै अफ्ठेरे भयो । उनीहरुले पुनलाई कसरी हुन्छ आफ्ठेरोमा पार्ने र काम गर्न सकेन भनेर हटाउने दाउमा त्यसवेलादेखि लागेको पाईन्छ । खासै सम्पर्कमा नराख्ने, अलग्गै समितिमा राख्ने, जिम्मेवारी नदिने जस्ता कामहरु गरिएको लामै सकय भएको रहेछ ।
यसो हुँदा हुँदै उनलाई जिम्मेवारी विहिन बनाइ छाडियो । स्थानीय स्तरमा सामाजिक काममा सक्रिय भएका पुन, खुँगा गाविसको राजनैति दल प्रतिनिधिका रुपमा जनमोर्चाबाटै सक्रिय हुँदै गए । २०७४ तिर स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेभएपछि, अर्के मान्छेलाई वडा अध्यक्ष बनाउने सम्मको खेल सुरु भयो । तर स्थानीय कार्यकर्ताले तिलकमाथि पार्टि र नेताहरुले आफ्नो स्वार्थमा प्रयोग भएन भन्ने वहानामा अन्याय गरेको भन्दै विद्रोह गरेपछि, विभिन्न भूमिकाबाट अध्यक्ष बनाउने प्रस्तव सहित नेताहरु भेटन पुगे । उनलाई त्यो पद नचाहिएको भन्दै अस्वीकार गरिदिएपछि, फेरि आग्रह अनुरोध गर्नेकामहरु भइरहे । स्थानीय कार्यकर्ताको जोड र अनुरोधमा उनलाई वडा अध्यक्षमा उमेदवार बनायो । काँग्रेसको पकड क्षेत्र रहेको खुँगा गाविस नगरपालिका भएपछि वडामा समाहित भयो । सिंगै टिमले जित्नु पर्दथ्यो । भुगोल, भेग र समानुपातिक प्रतिनिध्वका लागि पुनकै अग्रसरतामा नयाँ शत्ति पार्टिका एक समुहलाई जनमोर्चामा प्रवेश गराएर वडा सदस्य सहित पाँचै जना निर्वाचित भएका हुन् ।
निर्वाचनका बेला खुँगाबाट पार्टिको मेयरमा भोट नहाल्न तिलकले अरु रोल प्ले गर्छकि भनेर जासुस लाउनेसम्मका काम भएकाप्रति स्थानीयले नेतृत्वको त्यो आचरणप्रति असहमति जनाएका रहेछन् । तर राष्ट्रिय जनमोर्चालाई सबैभन्दा बढी भोट खसाल्ने वडा मध्येको ४ नम्बर वडा एक भयो । बिसौं वर्ष रहन सहन भएको बुर्तिबाङ बजारबाट मेयरका उमेदवारलाई ५९ भोट खस्दा वडा नं. ४ बाट करिव ५ सय बढी भोट खसेको इतिहास छ, स्थानीयले यस्तो बताए ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा विजयी भएपछि कार्यपालिका सदस्य निर्वाचनको समय आयो । मेयरमा हार खाएका स्थानीय नेताले अव प्रतिपक्षमा बस्नुपर्छ भन्दै काँग्रेससँग मिलेर कार्यपालिकाको निर्वाचनमा जाने प्रस्ताव ल्याए । वडा जितेका पुन सहित अन्य जनप्रतिनिधिहरुले वडाको काम गर्न प्रतिपक्ष हुनुहुँदैन भन्ने मत सहित तत्कालिन एमालेसँग मिलेर कार्यपालिका सदस्यमा निर्वाचन लडे । वडा नंं ३ बाट वडा अध्यक्षको निर्वाचन हारेका नरबहादुर सुनार र वडा नं. ६ बाट वडा अध्यक्षको निर्वाचन हारेका थमबहादुर छन्त्याललाई पुनः कार्यपालिका सदस्यमा निर्वचित गराइयो ।
पार्टि छाडेर नेकपा प्रवेश गरेका कार्यपालिका सदस्यको पद जस्ताको तस्तै :
स्मरणीय र उदेक लाग्दो विषय त यो छ कि, राष्ट्रिय जनमोर्चाबाट वडा सदस्यमा पराजित भएका थमबहादुर छन्त्याल, एक वर्षपछि नेकपामा प्रवेश गरे । अर्थात उनले दल त्याग गरे । दल त्याग गरेका सदस्यलाई पार्टिले कुनै कार्वाही गरेको विज्ञप्तिसम्म निकालेन । छन्त्याल, अहिलेपनि ढोरपाटन नगरपालिका कार्यपालिका सदस्य छन् । कार्यकर्ताको प्रश्न छ, किन पार्टि छाडेर टिको लगाउँदै नेकपा प्रवेश गरेकाको पद जाँदैन ? तर पार्टिमै भएका कार्यकर्ता जो अन्तरविरोधमा रहेकै कारण उनीमाथि गलत आरोपहरु लगाउँदै पदखाने काम हुन्छ ? जवाफमा स्थानीय नेता मौन छन् । तर पुनलाई पार्टिले कार्वाही गरेपछि पनि म राष्ट्रिय जनमार्चामै छु भन्दा भन्दै दल त्याग गरेको आरोप-पत्र निर्वाचन आयोगमा झुठो विवरण पेश गरि पद खाने काम भएको सत्य हो ।
सत्यको राजनीति, निष्ठाको राजनीति गर्ने राजमोले किन झुठो विवरण पेश गरेर एक वडा अध्यक्षको पद खाने काम गरेको होला भन्ने अनौठो सवालको वर्तमान नेताहरुसँग कही जवाफ छैन । अनुशासनको कार्वाहीको पनि नियम हुन्छ तर मन नपरेको भएपछि जे-जे गरेपनि हुन्छ भन्ने दलिल पश्चिम बागलुङको एक उदाहरणमार्फत जनमोर्चाले सफेद् झुठको सहारा लिएर आफ्नै कार्यकर्तामाथि अन्यायपूर्ण व्यवहार गरेको तथ्य बाहिरिएको छ ।
यो पनि हेरौं,
“म के गरु (कबिता)”
सामुदायिक रेडियो परिवर्तनको आधारभूत तालिम उद्घाटन